विदेशबाट उद्दार गर्दा पनि कर्णाली भन्दा बागमतीलाई नै उच्च प्राथमिकता! - Himal Dainik
काठमाडौँ ७ श्रावण २०७७, बुधबार १७:५४
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण विश्वभर अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्दार गर्दा पनि मानव विकासको सुचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश पछिल्लो स्थानमै सिमित हुनु परेको छ।
समग्रमा विकास र अवसरका हिसाबले सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहको बागमती प्रदेशका नागरिकले राज्यबाट देशभित्र जे जस्तो सेवा, सुविधा र अवसर पाएका छन् त्यो अवसर विदेशबाट उद्दार गरिँदा पनि कायमै रहेको तथ्यहरुले देखाएको छ।
महामारीको त्रासदीकाबीचमा विश्वका २५ मुलुकमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका २९ हजार ७ सय ८९ नेपाली हवाइ मार्ग भएर स्वदेश फर्किएका छन्।
गत शुक्रबारसम्म १ सय ९२ चार्टर उडानबाट फर्किएका यी नेपालीमध्ये ७ हजार ७ सय ६५ जना उपत्यकामै छन्। जुन विदेशबाट अहिलेसम्म आएको संख्याको यो २६.०६ प्रतिशत हो।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चैत ९ गतेदेखी नेपालमा÷बाट हुने नियमित व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको छ। त्यसयता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुमतिबाट चार्टर र उद्दार उडानबाट विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश भित्रयाइएको हो ।
छाउनीस्थित कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र (सीसीएमसी)ले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार, उपत्यकामा रहेकामध्ये क्वारेन्टाइनमा ७ हजार ७ सय ५ जना, अस्पतालमा ५० जना र अन्यमा १० जना रहेको उल्लेख छ।
सीसीएमसी स्रोतका अनुसार १० जना स्वदेश फर्किए लगत्तै कहाँ गए अथवा कहाँ गएर बसे भन्नेसम्मकोे जानकारी सरकारसँग नै छैन।तथ्यांकमा होटल, घर र स्थानीय गरी तीन प्रकारका क्वारेन्टाइनमा उनीहरुलाई राखिएको उल्लेख छ। जसमध्ये होटलमा १ हजार ९७, घरमा ३ हजार ३ सय ९५ र स्थानीय क्वारेन्टाइनमा ३ हजार २ सय १३ जना राखिएको उल्लेख छ।
अघिल्लो साता हिमाल दैनिक प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. सागर राजभण्डारीले विदेशबाट आएका नेपालीहरुको व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त नभएकाले कोरोनाको संक्रमण घट्दो होइन, बढ्दो अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘विदेशमा पीसीआर गर्न सहज नभएकाले रोगका लक्षण देखिएकालाई समेत जहाजमा हालेर नेपाल ल्याइएको छ। यहाँ ल्याएर उनीहरुलाई उपयुक्त सावधानी अपनाएर सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउने चुस्तदुरुस्त व्यवस्था नभएकाले संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ,’ निर्देशक प्रा.डा. राजभण्डारीले भनेका थिए। ‘अझ सरकारले लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नगर्ने नीति बनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म लक्षण नभएकालाई पनि संक्रमण देखिएकाले त्यसले झन त्रास बढाएको छ।’
डा. भण्डारीले भनेजस्तै कोरोना संक्रमण उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कम हुँदै गएपनि उपत्यकामा कम भएन। उपत्यकामा संक्रमण देखिएका प्रायः विदेशबाट आएका व्यक्तिहरु नै बढी रहेका छन्। र डा. राजभण्डारीले भनेको एक हप्तापछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारबाट विदेशबाट आएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशबाट आएका सबैले सरकारले बनाएको नीतिको पालना नगर्ने र सरकारको लक्षण नभएकालाई पीसीआर परीक्षण नगर्ने नीतिका कारण संक्रमण फैलन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिएपछि मन्त्रालयले विदेशबाट आउन सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबारको नियमित प्रेस व्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्जर गौतमले विदेशबाट हवाइ मार्ग भएर आउने सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।
‘अब विदेशबाट आएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ, आइतबारदेखि विदेशबाट आएका सबै नेपाली नागरिकको पीसीआर परीक्षण गरिनेछ’ डा. गौतमले भने।
सरकारले गरेको गल्तीका कारण उपत्यका र समुदायमा कोरोनाको संक्रमण फैलने सन्त्रास बढेको जनस्वास्थ्यबिदहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशनक डा. लक्ष्मीराज पाठकले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मापदण्ड विपरित सरकारले विदेशबाट आएकाहरुलाई परीक्षणवीना घर पठाएकाले संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दछन्।
‘सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन डब्ल्यूएचओको मापदण्ड विपरित गाइडलाइन आफ्नो हिसाबले हेरफेर गरेर लक्षण नदेखिएकालाई परीक्षण नगरी घर पठायो। होम क्वारेन्टाइनमा बस्न दियो। यसले घर गएको केही समयपछि परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण देखिएको केही घटना देखिएका छन्। जसले समुदायमा संक्रमण फैलने सम्भावना प्रवल देखिएको छ। त्यो सरकारको जनताप्रतिको धोका हो, नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको खेलवाड हो,’ पाठकले भने ।
सरकारले विदेशबाट आएकालाई प्रदेशगत रुपमा छुट्टाइएका होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राख्ने र त्यहाँ कोरोना परीक्षण गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा पु¥याएर सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने नीति सरकारले बनाएको थियो। विदेशबाट आएका ७३.९४ प्रतिशत नेपालीले सरकारको नीति अबलम्बन गरेपनि बाँकी २६ प्रतिशत उपत्यकामै रहेका छन्। उपत्यका र स्रोत र शक्तिको आडमा घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नेमा अमेरिका बेलायत लगायत ठूला मुलुकबाट आउने धेरै छन्।
तथ्यांकमा अमेरिकाबाट आएका ४ सय २३ जना मध्ये ७३ जनामात्रै प्रदेशमा गएका छन् भने ३ सय १७ जना घरमै होेम क्वारेन्टाइनमा बसेका देखिन्छ। बेलायतबाट आएका २ सय २९ जनामध्य ६७ जनामात्रै प्रदेशमा गएका छन् भने बाँकी १ सय १९ जना घरकै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्।
जनस्वास्थ्यविद समिरमणि दिक्षितले आफूमा कोरोना संक्रमण छैन भन्ने परीक्षण गर्न पाउने नागरिकको अधिकार उपयोग गर्न नदिएकाले अहिले समुदायमा संक्रमण फैलने सम्भावना बढेको जिकिर गर्दछन्।
‘प्रयोगशालामा गएर आफूलाई कोरोना संक्रमणको निगेटिभ छ भन्ने परीक्षण गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हो। चाहना राख्नेलाई परीक्षण गराउने दायीत्व राज्यको हो, त्यसबाट राज्य उम्कन मिल्दैन। तर, विभिन्न बाहना बनाएर घर पठाइयो। अहिले त्यसको परिणाम विस्तारै देखिँदैछ,’ उनले भने।
अफ्गानिस्थान, अष्ट्रेलिया, ओमन, कतार, म्यानमार, कुबेत, जापान, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, मलेसिया, माल्दिभ्स, श्रीलंका, युएई, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, हङकङ, पाकिस्तान, बहराइन, अमेरिका, बेलायत, इजरायल, चीन, टर्की र फिलिपिन्स गरी २५ मुलुकबाट अफ्टेरोमा परेका नेपाली स्वदेश फर्किएका सीसीएमसीको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको उद्दार गरिएको छ। तथ्यांकमा शुक्रबारसम्म सबैभन्दा धेरै युएईबाट ६ हजार ८ सय ७२ नेपालीको उद्दार भएको छ। त्यस्तै कुबेतबाट ५ हजार ५ सय ४९, साउदी अरेबियाबाट ४ हजार ७ सय ८७, मलेसियाबाट ३ हजार २ सय २६ र कतारबाट ३ हजार २७ नेपालीको उद्दार भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तथ्यांक अनुसार, अहिलेसम्म उद्दार भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका छन्। बागमती प्रदेशका ८ हजार ६ सय २७ जनाको उद्दार गरिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका नागरिकको उद्दार गरिएको छ। तथ्यांकका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका ६ सय ६८ जनाको मात्रै उद्दार भएको छ।
(फ्रिडम फोरमको सहयोगमा तयार पारिएको सामाग्री)
यस सम्बन्धि अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्:
अघिल्लोकोरोना अपडेट: २४ घन्टामा १०० जना संक्रमित, २ को मृत्यु
पछिल्लोरातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण शनिबारबाट सुरु हुने